गगनलाई छायाँ प्रधानमन्त्री बनाए कसो होला ? |Tapaiko Khabar
गगनलाई छायाँ प्रधानमन्त्री बनाए कसो होला ?
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : फागुन २८, २०७४ मुख्य खबर, विचार
विक्रम आदित्य ।। यो मेरो व्यक्तिगत इच्छा हो, गगन थापा छायाँ प्रधानमन्त्री बनुन् । ‘गफाडी’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई तर्कले ढाल्न सक्ने नेता गगन नै हुन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई निकै तर्किला प्रश्न गरे । हुन त, हाम्रा प्रधानमन्त्री निकै चतुर छन् । उनले सहजै दिन सक्ने उत्तर छन् भने सोझै भन्छन्, सकेनन् भने व्यंग्यतिर हाम्फाल्छन् । जे भएपनि केपी ओलीसँग तर्कको सामना शेरबहादुर देउवा न विजय गच्छदार कसैले गर्न सक्दैनन्, शिवाय गगन थापा ।
प्रतिपक्ष बलियो भएका बेला छायाँ सरकार पनि निकै प्रभावकारी हुन्छ । तर, अहिले संसदमा ओली निकै शक्तिशाली बनेका छन् । यस्तो बेला छायाँ सरकार प्रभावहीन पनि हुन सक्छ । त्यसैले यसको नेतृत्व कुशल र सक्षम व्यक्तिले गर्नुपर्छ । कांग्रेसमा कुशल र दक्ष त अरु पनि छन्, तर केपी ओलीलाई मनिटर गर्न सक्ने र नियाल्न सक्ने नेता गगन थापा नै हुन जस्ता लाग्छ ।
गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माजस्ता युवा नेतालाई काम गर्न दिने हो भने नेपाली कांग्रेस शेरबहादुरको पञ्जाबाट उम्कन नसकेपनि अर्को पटक फेरि हार्ने सम्भावनाबाट भने मुक्त हुन सक्छ । छायाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व न रामचन्द्रलाई गर्न दिन हुन्छ, न शेरबहादुरलाई । यी दुबै नेता अब तीक्ष्ण रुपले सोच्न सक्दैनन्, बुढो भइसकेका छन् । त्यसैले गगन थापालाई छायाँ प्रधानमन्त्री, विश्वप्रकाश शर्मालाई गृहमन्त्री, धनराज गुरुङलाई रक्षा, प्रदीप पौडेललाई जनसंख्या तथा वातावरण, डा. नारायण खड्कालाई छायाँ अर्थमन्त्री बनाए कांग्रेसको भलो हुन्छ । बाँकी मन्त्रालय र सभामुख, उपसभामुखका कामकार्बाही नियाल्ने पनि सक्षम व्यक्ति राख्न सके कांग्रेस अब पाँच वर्षभित्र चम्किन पनि सक्छ ।
यस भन्दा अगाडीयसरी बनाए केपी ओलीले नयाँ रेकर्ड, कांग्रेस नयाँ तयारी गर्दै
यस पछिममका पारखीलाई दुखद खबर, पूरा पढ्नुहोस्
‘गोरे’को समूहबाट हराएको ३३ किलो सुन भारतमा फेला परेको दाबी, समितिले थाल्यो अनुसन्धान
नुवाकोट मिनीट्रक दुर्घटना : २० जनाको सनाखत
कांग्रेस महासमिति बैठक : ५ दस्तावेजमा छलफल हुने